ကိုဗစ် လူနာ ကုသပျောက်ကင်း လို့ ဆေးရုံက ဆင်းကာမှ လက်မခံ နိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ ကျေးရွာ – Cele Posts
ကိုဗစ် လူနာ ကုသပျောက်ကင်း လို့ ဆေးရုံက ဆင်းကာမှ လက်မခံ နိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ ကျေးရွာ
ကိုဗစ်လူနာ ကုသ ပျောက်ကင်းလို့ ဆေးရုံဆင်းကာမှ လက်မခံနိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ ကျေးရွာတွေရှိနေတာ စိတ်မကောင်း စရာပါ။ စိတ်ဒဏ်ရာတွေ ထပ်ပေးသလို ဖြစ်နေကြပြီ။ ကုသ/ကူညီပေးနေသူ တွေကို အားနာကြ ပါဦးဗျာ။
သူတို့က ပိုးတွေ့လို့ ကုသမှုခံယူပြီး ကြပြီလေ။ လက်မခံနိင်ဘူးဆိုသူတွေ ကိုယ်တိုင် ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်ခဲ့ ရင်ရော အဲ့ဒိလို ပြောနိင်ကြမလား? ကိုယ့်အနီး အနားမှာ ပိုးရှိရဲ့နဲ့ မသိတဲ့သူတွေ ရှိနေနိင် တာကို သတိပြုရမှာပါ။ ဆေးရုံဆင်းခွင့်ရသူတွေ အနေနဲ့က ထင်သာမြင်သာရှိနေပြီးသား၊ သူတို့ဆီ ကနေ ထပ်မံကူးစက်မှုမဖြစ်နိင်တော့ဘူး ဆိုတဲ့ အခြေအနေရောက်ပြီမို့ ကျန်းမာရေးဌါန အနေနဲ့လဲဆင်းခွင့်ပြုခဲ့ကြ တာလေ။
ဒီအချိန်မှာ ဖေးမ ကူညီကြရမယ့် အစား စိတ်ဒဏ်ရာတွေ ထပ်ပေးကြရင် လူသားချင်းစာနာမှုမရှိ လို့လို့ပဲ မှတ်ချက်ပြုရမှာပဲ။ ပိုးတွေ့တွေ့ချင်းတောင် စာနာစိတ်နဲ့ ကူညီပေး ကုသပေးနေကြတဲ့ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေ ပရဟိတသမား တွေ ကြောက်ဖို့လဲ ထားကြပါဦး။
ခက်တယ်။ မကြောက်တော့လဲ လမ်းလယ်ခေါင် ထွက် က ။ ကြောက်တော့လဲ အရိပ်တွေ့တောင် ထ ခုန်နေ ကြတော့ မမျှတဘူးဖြစ် နေပြီပေါ့။
ရင်ခုန်သံ ရှင်ရေးကူညီမှု အသင်း အုတ်တွင်းမြို့
ကိုဗဈ လူနာ ကုသပြောကျကငျး လို့ ဆေးရုံက ဆငျးကာမှ လကျမခံ နိုငျဘူး ဆိုတဲ့ ကြေးရှာ
ကိုဗဈလူနာ ကုသ ပြောကျကငျးလို့ ဆေးရုံဆငျးကာမှ လကျမခံနိုငျဘူး ဆိုတဲ့ ကြေးရှာတှရှေိနတော စိတျမကောငျး စရာပါ။ စိတျဒဏျရာတှေ ထပျပေးသလို ဖွဈနကွေပွီ။ ကုသ/ကူညီပေးနသေူ တှကေို အားနာကွ ပါဦးဗြာ။
သူတို့က ပိုးတှလေို့ ကုသမှုခံယူပွီး ကွပွီလေ။ လကျမခံနိငျဘူးဆိုသူတှေ ကိုယျတိုငျ ရဲ့မိသားစုဝငျတှဖွေဈခဲ့ ရငျရော အဲ့ဒိလို ပွောနိငျကွမလား? ကိုယျ့အနီး အနားမှာ ပိုးရှိရဲ့နဲ့ မသိတဲ့သူတှေ ရှိနနေိငျ တာကို သတိပွုရမှာပါ။ ဆေးရုံဆငျးခှငျ့ရသူတှေ အနနေဲ့က ထငျသာမွငျသာရှိနပွေီးသား၊ သူတို့ဆီ ကနေ ထပျမံကူးစကျမှုမဖွဈနိငျတော့ဘူး ဆိုတဲ့ အခွအေနရေောကျပွီမို့ ကနျြးမာရေးဌါန အနနေဲ့လဲဆငျးခှငျ့ပွုခဲ့ကွ တာလေ။
ဒီအခြိနျမှာ ဖေးမ ကူညီကွရမယျ့ အစား စိတျဒဏျရာတှေ ထပျပေးကွရငျ လူသားခငျြးစာနာမှုမရှိ လို့လို့ပဲ မှတျခကျြပွုရမှာပဲ။ ပိုးတှတှေ့ခေ့ငျြးတောငျ စာနာစိတျနဲ့ ကူညီပေး ကုသပေးနကွေတဲ့ ကနျြးမာရေး ဝနျထမျးတှေ ပရဟိတသမား တှေ ကွောကျဖို့လဲ ထားကွပါဦး။
ခကျတယျ။ မကွောကျတော့လဲ လမျးလယျခေါငျ ထှကျ က ။ ကွောကျတော့လဲ အရိပျတှတေ့ောငျ ထ ခုနျနေ ကွတော့ မမြှတဘူးဖွဈ နပွေီပေါ့။
ရငျခုနျသံ ရှငျရေးကူညီမှု အသငျး အုတျတှငျးမွို့